Esory ny moles sy ny lesoka amin'ny hoditra amin'ny Adobe Photoshop | Famoronana an-tserasera
Esory ny moles sy ny lesoka amin'ny hoditra amin'ny Adobe Photoshop Zavatra tena ilaina tokoa izany azontsika ampiharina amin'ireo sary rehetra izay ahitantsika fa nisy karazana lesoka niditra tao anaty hoditra. Mety ho a maratra, fantsika faribolana maizina ny alina mivoaka na karazana tsy fahalavorariana izay hitantsika amin'ny hoditra.
Photoshop is the fitaovana tsara indrindra ampiasaina amin'ny famerenana sary ny lamaody sy doka, Ny fifehezana ireo karazana fitaovana ireo dia hanampy antsika hiditra tsikelikely amin'ny fomba fiasan'ny matihanina amin'ny sehatra.
Photoshop dia fitaovana mazika izay hanampy antsika manitsy ny karazana lesoka rehetra amin'ny sarinay amin'ny fomba mora sy tena ahazoana aina, afaka minitra vitsy dia hahazo ianao esory izay karazana lesoka hitanay amin'ny hoditra. Ny fitaovana quintessential hanitsiana ireo karazana lesoka ireo dia tena mora sy haingana dia ny fitaovana patch, mamela antsika ity fitaovana ity mifidy faritra (voan'ny lesoka sasany) ary apetaho amin'ny faritra hafa tsy misy tsiny, mandeha ho azy ahitsy ny bibikely.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia sokafy ny sary ao amin'ny Photoshop. Vantany vao misokatra ny sary ao amin'ny Photoshop, ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia ny fisafidianana ny fitaovana patch.
Manao a fisafidianana ny faritra tiana ahitsy miaraka amin'ny fitaovana patch, avy eo tarihintsika ny safidy nanao faritra tsy misy tsiny. Eo an-tampon'ny tabilao fitaovana hita izay hitantsika safidy roa: fiaviana sy toerana itodiana, mamela antsika ireto safidy ireto manitsy lesoka na manaova azy ireo. Amin'ity tranga ity dia hampiasa ny safidy alefa izahay handika ampahany tsy misy tsy fahombiazana amin'ny faritra voafantina.
Saika mandeha ho azy nahavita nanala ny lesoka tamin'ny hoditra izahay tamin'ny alàlan'ny Photoshop. Ity fitaovana ity dia be mpampiasa amin'ny lamaody sy ny indostrian'ny dokam-barotra mba hialana amin'ny lesoka mety hitranga rehetra izay modely.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Esory ny moles sy ny lesoka amin'ny hoditra amin'ny Adobe Photoshop
PixTeller dia fitaovana maimaim-poana izay hanampy anao hamolavola sary ho an'ireo tambajotra sosialy